Soo-saaraha qalabka gacanta ee ugu fiican gacanta koronto-dhaliye iyo Warshad | Fepton
Qaybta madaxa sariirta
Nalalka aan lahayn ee Geeta
Iftiinka nadiifinta UV
Tayo & badbaado
Buug gacmeedka korantada gacanta ee korantada gacanta
Nooca: Qalitaanka qalitaanka
Tusaale: HM-3100 / HM-7100
Qalabka qalliinka wuxuu u baahan yahay inuu daboolo aagga qalliinka oo dhan, oo loo isticmaalo in lagu qaado koronto, kormeerayaal, bambooyin faleebooyin, bambooyin saliinge ah, bandhigyo iyo qalab kale, iyo in la siiyo gaas, awood koronto, iyo isgaarsiinta qalabka. Waxaa lagu qalabeyn doonaa fiilooyin iyo tuubooyin si loo sameeyo qalabka iyo fiilooyinka si loo hagaajiyo habka shaqada iyo deegaanka shaqada. Macno malahan waa hal-gacan ama laba-gacan-gacmeed qalliin, mid kasta oo wadajir ah waa in lagu qalabeeyaa qalab bareeg ah oo farsameeya elektromagnetic. Dhanka kale, qalab kala jejebiye gaas ikhtiyaari ah ayaa lagu dari karaa si loo xaqiijiyo ilaalinta kala jejebiinta laba-laabka ah ugana fogaato inuu ku sii socdo hawlgalka.
Saldhig qaybo ku duugan
Birta No .8 kanaalka biraha ayaa loo xushay inuu yahay taageerada ugu weyn, birta xagasha No .5 oo ah taageero qasab ah. Mawqif kasta waa la taageeraa midba midka kale, qaabdhismeedkuna waa deggan yahay.
Jirka dogobku wuxuu ka samaysan yahay aluminium awood badan leh
Dhererka caadiga ah: 600-1000mm
Dhererka la hagaajin karo
Ugu badnaan rar: 380kg
Biriigga elektromagnetic, bareega korantada, labalaabashada jejebiinta labada ikhtiyaar
Dhererka jirka: 600-1350mm
Kala saarida gaaska iyo korontada
Koronto xoog leh iyo kala go'id koronto oo daciif ah
Daawaha aluminium ee birta isku dhafan,
Iyada oo tareenka birta ahama
Naqshadeynta qaabka ka hortagga isku dhaca,
Cabirka waxtarka leh ee wax ku oolka ah 590 × 450 × 35 (mm),
Qalliinka hawlgalka ee ku qalabaysan xagga hore
Daawaha aluminium ee birta isku dhafan
Awood sare oo isku dhafan maadada ABS aan xuduud lahayn
SS mashiinka faleebo faleebo 4 kumbiyuutar dherer faleebo faleebo laysku hagaajin karo 1 kumbiyuutarro hal fidin ah oo isku dhafan oo isku dhejisan
Jir bamka faleebo
4pcs SS jir bamka faleebo
Dhererka jillaab hagaajin karo 1 kumbiyuutarrada gacanta kordhinta isku dhafan
Aragti: 300 300 150 × 100 (mm)
FEPDON 2 kumbiyuutarada Oxygen
FEPDON 1 kumbiyuutarrada hawada
FEPDON 1 kumbiyuutarada terminalka Vacuum
Logram / Schneider / Nooc caan ah oo ka baxa GB-dalool daloola shan-dalool
Qalabka terminal earthing
Isku xirka shabakada
Logram ： RJ45
Mitirka socodka oksijiinta
HM3100 Suufin Buugga loogu talagalay Qalliinka
Awoodda xamuulka ee Pendant
1 pc, 800mm-1200mm dherer
Hal (gacanta ku shaqeeya) 800 ～ 1000mm
Gacanta Wareejinta Xagasha
Awoodda Xamuulka Maxium
8 * ~ 220V, 50Hz
jejebiyey khilaaf ama bareegga pneumatic ee ikhtiyaar u ah
Heerarka Gaaska Caafimaadka ee Caafimaadka
Ingiriis, Jarmal, Faransiis, Metric, Ohmeda, Heerarka DISS iwm. Ikhtiyaar
Gacanta kordhinta nooca tareenka, 1pc
HM 3100 suunka daaweynta qalliinka
O2 * 2, Hawo * 2, Vac * 1, CO2 * 1
Socket Power * 10
Dekedda terminal earthing qalabaysan * 2
Isku xirka shabakada * 1
Isku xirnaanta taleefanka * 1
khaanadaha qalabka * 1 (dhererka la hagaajiyay)
khaanad * 1
IV Pole * 1
Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee fekerka FEPDON CAAFIMAADKA waxaa ka mid ah:
1) Nidaamka dukaamaysiga ee internetka oo dhammaystiran, oo ay kujiraan dhadhaminta, amar bixinta, bixinta, dhoofinta, helitaanka, xaqiijinta, DHAMMAAN ONLINE; 2) BILAASH adeegyo caymis caalami ah oo loogu talagalay dhammaan iibsadayaasha ay quudinayso FEPDON MEDICAL; 3) Adeegyada kormeerka wax soosaarka xirfadlayaasha ah ee ka socda shirkadaha caalamiga ee aqoonsan wada-hawlgalayaasha, BV iyo SGS; 4) Qeybaha qalabka caafimaadka oo dhameystiran waxaa ka mid ah qeybta guud ee isku dhafan, qolka qalliinka, qolka gurmadka, qalabka qolka haweenka; 5) Soo saaraha dhabta ah oo leh awood wax soo saar weyn, wuxuu la kulmi karaa yoiur OEM iyo ODM baahiyaha muddada dheer.
1. Soo saaraha dhabta ah, OEM ODM waxtarka.
2. Hal joogsi oo maraakiib ah oo loogu talagalay qalabka isbitaalka ee leh tayo wanaagsan oo deggan.
3. Khibrad qani ku ah soosaarida iyo rakibida.
Baakadaha & Saadka
1.Waxaan haynaa saad buuxa oo waxaan ku bixin karnaa waqti gaaban.
2.OEM iyo ODM amar ayaa la aqbalay, Nooc kasta oo daabacaadda logo ama design ah ayaa la heli karaa.
3. Tayo Wanaagsan + Qiimaha Warshada + Jawaab Deg Deg ah + Adeeg Lagu kalsoonaan karo, waa waxa aan isku dayeyno sida ugu fiican inaan kuu soo bandhigno.
Dhammaan alaabooyinkayaga waxaa soo saaray shaqaalaheena xirfadlaha ah waxaanan leenahay kooxdeena ganacsiga ajaanibta ah ee waxtarka sare leh, waxaad si buuxda u rumaysan kartaa adeeggayaga.
Kadib markaad doorato
1. Waxaan ku xisaabtami doonnaa qiimaha ugu jaban ee dhoofinta oo waxaan mar kuu samayn doonnaa qaansheegad.
2. Hubso tayada mar labaad, ka dib kuu soo dir 1-2 maalmood oo shaqo kadib bixintaada
3. E-mayl ayaa kuu soo diraya raadraaca maya, oo ka caawi sidii aad u eryan lahayd baakadaha illaa ay kaaga yimaadaan
1.Waxaan aad ugu faraxsanahay in macaamiisha ay nasiiyaan xoogaa talo bixin ah oo ku saabsan qiimaha iyo wax soo saarka.
2.Haddii aad su'aal qabtid, fadlan si xor ah noola soo xiriir E-mayl ama Taleefan.
Hore: Buugga korantada elektromagneticKalka ku xiran shaashadda endoscopy
Xiga: Qalabka elektromagnetic ee suuxdinta qalliinka endoscopy
Manualelectricelectromagnetic hal gacanta anesth ...
Endos gacanta elektromagneticSingle gacanta ...
Qalabka korantada gacanta ee gacanta ku xiran
Endoscopy suuxdinta gacanta gacanta elektromagnetic ...
Xarunta gacanta ee 'Endoscopy Pendant' oo leh labalaab ...
Buug gacmeed laba-laab gacmeed koronto leh
Marabtaa inaad Sky kudareyso Rabitaankaaga?
Had iyo jeer noqo mid firfircoon sameynta xalalka si loo yareeyo halista wasakheynta deegaanka ee isbitaalka.
Ku soo dhawow baaritaanka
Ugu jawaab sida ugu dhaqsaha badan
Cinwaanka:201201, Room 203,2nd & Room 301,3rd, Bldg 4, No.256 Chuangyun Road, Degmada Pudong, Shanghai, China
Waxaan furan nahay: Mn-Fr: 8: 30 am-6: 00 pm